ringlock, cuplock သို့မဟုတ် H ဘောင်များအတွက်ငြမ်းဂျက်အခြေစိုက်စခန်း, etc
jack base ကိုအသုံးပြုခြင်း - ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်၌သံမဏိပိုက်များနှင့်ငြမ်းများနှင့်အတူအသုံးပြုသည်။ ငြမ်းနှင့်အမြင့်၏ဖွဲ့စည်းပုံ၊ အလေးမနှင့်ချိန်ခွင်ကိုချိန်ခွင်လျှာညှိရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုကွန်ကရစ်လောင်းခြင်းဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင်အများဆုံးအသုံးပြုသည်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းအိမ်ခြံမြေအလျင်အမြန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်သုံးဖက်မြင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတို့ကြောင့်အိမ်ခေါင်မိုးအထောက်အပံ့သည်လျင်မြန်စွာတိုးတက်ခဲ့သည်။ ဆောက်လုပ်ရေးဂျက်များ၏ခွဲခြား: 1. အစိတ်အပိုင်းအရသိရသည် ...
၁။ နိဒါန်း Luowen HDG ဘောင်ဆောက်လုပ်ခြင်းသည်အလေးချိန်အလွန်ကြီးမားသောပမာဏ (၆၇၅ ကီလိုဂရမ်) နှင့်ကုန်သွယ်မှုအားလုံးအတွက်သင့်လျော်သည်။ အုတ်များ၊ ဖြိုဖျက်ခြင်း၊ လက်သမားများ၊ ကျောက်ခဲများ၊ သံမဏိထုတ်လုပ်သူများစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ထိုငြမ်းသူတို့ကိုယ်သူတို့ဝယ်ခြင်းနှင့်ငွေစုချင်တယ်။ 2. ၎င်း၏ပေါ့ပါးသောအလေးချိန် - တည်ဆောက်ရန်အလွန်မြန်ဆန်သည် - လူတစ် ဦး မှတပ်ဆင်နိုင်သည် - ၎င်းသည်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည်။ - အားလုံးသောအရာများသည်သင့်အားအချိန်နှင့်ငွေကိုသက်သာစေသည်။ အချစ်ရေ ...
Kwikstage Scaffolding တစ်ခုချင်းစီတွင် 500mm spigot ရှိပြီး V'-Pressings သည် ၄၉၅ မီလီမီတာစင်တာများတွင်တည်ရှိပြီး Ledgers နှင့် Transoms အတွက်တည်နေရာများကိုပေးသည်။ အရည်အသွေး Kwikstage ကိုနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ ISO 9002 အရည်အသွေးအာမခံချက်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ထုတ်လုပ်ထားပြီးအရည်အသွေးနှင့်လုံခြုံမှုကိုစစ်ဆေးရန်အတွက်တံဆိပ်ခေါင်းဖြစ်သည်။ ရိုးရိုးနှင့်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည် Kwikstage ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်း (၄) ခုသာပါဝင်သည်။
၁။ မိတ်ဆက် Luowen Ring Lock Scaffolding သည်လက်တံအမျိုးအစားအသစ်ဖြစ်ပြီးအဓိကအားဖြင့် Ring, standard, ledger, brace နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး၎င်းသည်၎င်း၏အားသာချက်များနှင့်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ကမ္ဘာ့စျေးကွက်တွင်အလွန်ကြိုဆိုသည်။ ၂။ အသွင်အပြင် ၁။ ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံ - အဓိကအစိတ်အပိုင်းများတွင်စံ၊ လယ်ဂျာ၊ တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူပြီးသိုလှောင်ရန်၊ လွှဲပြောင်းရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်လွယ်ကူသည်။ 2. ညှိခြင်းအတွက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် - လက်စွပ် ၈ ခုရှိပါတယ်။ ဒီတော့လယ်ဂျာနှင့်သတ္တုအထိမ်းအချုပ်ဟာ ...
၁။ မိတ်ဆက်： Luowen CupLock ငြမ်းသည်သစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သုတေသန၊ ဒီဇိုင်းနှင့်အဆင့်မြင့်သောပူးတွဲနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏အဆင့်မြင့်နည်းပညာကိုရည်ညွှန်း။ ဖွံ့ဖြိုးပြီးအရည်အသွေးနှင့်အသုံးချသည်။ 2.Feature： ၁။ ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံ - အဓိကအစိတ်အပိုင်းများတွင်စံ၊ လယ်ဂျာနှင့်သတ္တုအထိမ်းအချုပ်များပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်၊ သိုလှောင်ရန်၊ လွှဲပြောင်းရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်လည်းလွယ်ကူသည်။ ၂. လုံခြုံစိတ်ချရမှုနှင့်တည်ငြိမ်မှု - တက်ခွက်တွင်ဝက်အချင်းပွတ်တိုက်အားနှင့်ဆွဲငင်အားရှိပြီး၊
H20 သစ်သားရောင်ခြည် (ဝက်ဘ်နှင့်ပလတ်စတစ်ခေါင်းဖြင့်အလွှာသုံးသောအထပ်သား) Luowen H20 သစ်သားထုပ်သည်အလေးချိန်ပေါ့ပါးသည်။ ခံနိုင်ရည်မြင့်သည်။ ရေစိုခံနိုင်သည်။ အက်စစ် - အက်စစ် - အယ်ကာလီ - ခံနိုင်သော၊ ဝိသေသလက္ခဏာများ - ၁、 ပေါ့ပါးသည့်အလေးချိန် - H20 သစ်သားထုပ်၏သိပ်သည်းမှုသည်တစ်မီတာလျှင် ၄.၅ ကီလိုဂရမ်သာ ဖြစ်၍ သယ်ဆောင်ရန်လွယ်ကူသည်။ 2、 မြင့်မားသောဇွဲလုံလောက်မှု - H20 Timber Beam သည်ဖိုင်ဘာကြောင့်ပျက်စီးရန်မလွယ်ကူပါ။ 3、 ကောင်းမွန်သောသက်သေပြမှု - H20 သစ်သား Beam သည်ရေစိုခံ၊ အက်ဆစ်ကာကွယ်မှု၊
ကုန်ပစ္စည်းနိဒါန်း Luowen 120 သံမဏိကိုယ်ထည်စနစ်ပုံစံကိုအဓိကအားဖြင့်သံမဏိကိုယ်ထည်၊ အထပ်သား panel၊ ငြမ်းကွင်း၊ coupler၊ လျော်ကြေးပေးခြင်း waler၊ လည်စည်းလှံတံ၊ အထပ်သားကိုအချည်းနှီးသောသံမဏိဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်။ ၂။ ဘောင်သည်ပိုမိုအားကောင်းလာပြီးနံရံပုံစံပုံစံသည် 60KN / m2 ၏နှစ် ဦး နှစ်ဖက်ဖိအားကိုခံနိုင်ပြီးကော်လံပုံစံပုံသဏ္80ာန်သည် ၈၀ KN / m2 ကိုခံနိုင်သည်။ ၃။ စံသတ်မှတ်ထားသောစနစ်တစ်ခုအနေဖြင့်၎င်းသည်စုစည်းရန်လွယ်ကူသည်။
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် ၁။ အလေးချိန် - ၁၅ ကီလိုဂရမ် / စတုရန်းမီတာ ၂။ ပစ္စည်း - PP + ဖန်မျှင်အမျှင် + နိုင်လွန် ၃။ ဖွဲ့စည်းမှု: ကန့်လန့်ကာ၊ လက်ကိုင် ၄။ ဆက်တင်။ အကြိမ် ၁၀၀ ကျော် 5. သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်မသက်ဆိုင်: ဟုတ်သည်။ ၆။ အပူပုံပျက်သောအပူချိန် - ၁၅၀ အထက် ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် ၇။ စုဝေး၍ ဖြုတ်တပ်ပါ: လွယ်ကူမြန်ဆန်ပါသည်။ ၈ ။ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် - CNAS စမ်းသပ်မှု 2. ကော်လံအရွယ်အစား - ၃၀၀ မီလီမီတာ၊ ၃၅၀ မီလီမီတာ၊ ၄၀၀mm၊ ၄၅၀ မီလီမီတာအမြင့် ၇၅၀ မီလီမီတာ ၃။ မီလီမီတာနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ ၁။ ပစ္စည်း: PP + ဖန်မျှင်အမျှင် + နိုင်လွန် ၂ ။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ： ပြားများ၊ ထောင့်များ၊ လက်ကိုင်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ 4. Feature 1.Long သက်တမ်း & ...
အသေးစိတ်အချက်များ ၁။ အလေးချိန် ၁၅ ကီလိုဂရမ် / စတုရန်းမီတာ ၂။ ပစ္စည်း - PP + ဖန်မျှင်အမျှင်များနှင့်နိုင်လွန်လက်ကိုင်များ ၃ ။ ဖွဲ့စည်းမှု - ကျောက်ပြားများ၊ ထောင့်များ၊ လက်ကိုင်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ၅။ ဆက်တင် - အကြိမ် ၁၀၀ ကျော် ၆ ။ Celsius ၇။ စုဝေး၍ ဖြုတ်တပ်သည် - လွယ်ကူမြန်ဆန်သည်။ ၈။ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် - CNAS စမ်းသပ်မှုကော်လံအရွယ်အစား - ၂၀၀ 200 မှ ၂၀၀၀၀ မှ ၆၀၀ မီလီမီတာမှ ၆၀၀ မီလီမီတာအထိ၊ အရွယ်အစားမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ ပစ္စည်းနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ ၁။ ပစ္စည်း - PP + ဖန်မျှင်အမျှင် ၂။ ဖွဲ့စည်းပုံ： ပြားများ , ထောင့်များ, ကိုင်တွယ်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ Feature 1.Long ...
Timber Beam Formwork ပြားချပ်ချပ်ပုံစံကိုအထပ်သား၊ သစ်သားရောင်ခြည်နှင့်သံမဏိ walingng ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ သစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအထပ်သားများကိုသစ်သားထုပ်များဖြင့်အသာပုတ်ပါ။ ဝက်အူများကိုအသာပုတ်ပါ။ ပေါ့ပါး။ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အဆင်ပြေသည်။ ဆောက်လုပ်ရေးသည်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အလွန်ရင်းနှီးသည်။ အထပ်သားသည်ပြီးပြည့်စုံသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်။ အထပ်သားသည်လေထဲစိမ့်ဝင်နိုင်ပြီးရေစုပ်ယူနိုင်သည်။
ကုန်ပစ္စည်း Inroduction ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် Polypropylene ကိုအခြေခံပစ္စည်းအဖြစ်ဖန်ထည်ဖိုင်ဘာပေါင်းစပ်တည်ဆောက်ပုံပုံစံ၊ ဖန်မျှင်အမျှင်ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများနှင့်ပုံသဏ္intoာန်ထဲသို့ဖိအားပေးခြင်းကို အသုံးပြု၍ ထုတ်ကုန်အသစ်၊ ပုံသဏ္systemာန်စနစ်မှာ ၆၅ အထူစံပုံစံနှင့်အလူမီနီယံပုံစံ ၆၅ ခုပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်အမျိုးမျိုးသောဆက်သွယ်မှုပေါင်းစပ်မှုများတွင်အမျိုးမျိုးသောဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကိုခံနိုင်သည်။ တန်ဖိုးနည်းခြင်းနှင့်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလင်းလင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းတို့သည်စက္ကန့်ကြာရှည်ဖန်မျှင်၏အကြီးဆုံးအားသာချက်များဖြစ်သည်။
ABS PLASTIC FORMWORK အားသာချက်များ: 1.LIGHT ပေါ့ပါးသော panel များသည်ပိုမိုလုံခြုံသည်၊ အသုံးပြုရန်ပိုမိုလွယ်ကူပြီးပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းသည်။ ၎င်းသည်လေးလံသောပစ္စည်းကိရိယာများကိုထပ်ခါတလဲလဲရုပ်သိမ်းခြင်းကပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုနှင့်ထိခိုက်မှုကိုဖြစ်စေသည်။ Zhongming ပလပ်စတစ်ပုံသဏ္workာန်မှာပျမ်းမျှ ၁၇ ကီလိုဂရမ် / m2 အလေးချိန် ၁၃ ကီလိုထက်လေးသောဒြပ်စင်မရှိဘဲအလေးချိန်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာမည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆိုစနစ်တစ်ခုလုံးကိုလက်ဖြင့်အမြဲတမ်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ ကရိန်းလည်ပတ်မှုသည်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်မဟုတ်ပါ။ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များတွင်ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးကင်းရေးကိုအပေးအယူလုပ်စရာမလိုဘဲပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်စေသည်။
Ringlock ငြမ်းအစိတ်အပိုင်းများ, သတ္တု Cuplock ငြမ်း, Ringlock ငြမ်းကွင်းခတ်, အကြီးစား Duty Ringlock ငြမ်း, ငြမ်း Adjustable ဝက်အူဂျက်, Kwikstage ငြမ်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများ,